Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa | Teta! Nọvemba-Disemba 2013
Ihe Ị Ga-eme ma E Nwee Onye Gị na Ya Dị n’Ezigbo Mma
Mmadụ Inwe Mmekọahụ Tupu Ọ Lụọ Di Ma Ọ Bụ Nwunye
Ihe Ga-enyere Di na Nwunye Aka Ịna-agbaghara Ibe Ha
Otú Ụkpara Si Anụ Ihe
TETA! NỌVEMBA 2013
Ígwè ndị mmadụ zụrụ n’Ịtali n’afọ 2011 karịrị ụgbọala ndị a zụrụ n’obodo ahụ. Ụfọdụ ihe mere ndị mmadụ jizi azụ ígwè bụ na ihe siri ike, mmanụ ụgbọala na-adazikwa oké ọnụ. Ihe ọzọ bụ na ọtụtụ enweghị ego ha ji edozi ụgbọala ha ma ha mebie. Ma, idozi ígwè anaghị adacha oké ọnụ, ịgba ya dịkwa mfe.
E nwere ụmụ okorobịa iri na asaa jụrụ ịba amị n’ihi na ha bụ Ndịàmà Jehova. Ha ekweghịkwa arụ ọrụ ọzọ a sị ha rụọrọ ndị amị. N’ihi ya, ndị ọchịchị Aminia tụrụ ha mkpọrọ. Ma n’oge na-adịbeghị anya, Ụlọikpe Na-ahụ Maka Ihe Ruuru Mmadụ na Yurop kwuru na ihe ahụ ndị Aminia mere ụmụ okorobịa ndị ahụ megidere iwu. N’ihi ya, ha gwara ndị ọchịchị Aminia ka ha kwụọ ha ego iti aka n’obi nakwa ego ha mefuru n’ikpe ahụ.
Na Japan, e nwere ụmụaka ndị ha na ndị torola eto na-akparịtakarị ụka n’Ịntanet. Ndị ahụ akpasakwala ha arụ. Papa na mama ihe karịrị ọkara n’ime ha agwaghị ha na ụdị ndị ahụ nwere ike ịkpasa ha arụ. Ihe karịrị ọkara n’ime narị mmadụ ise na iri itoolu na itoolu ha na ụmụaka na-akparịtakarị ụka n’Ịntanet kwuru na ihe mere ha na ụmụaka ji akparịta ụka bụ na ha chọrọ ịrata ha ka ha na ha nwee mmekọahụ.
Na Chaịna, ụzọ na-akpọchịkarị n’ụfọdụ obodo n’ihi na ụgbọala hiri nne. N’ihi ya, ndị ọchịchị anaghịzi ekwe agbanye ụgbọala ọhụrụ nọmba. Ị manụ na e nweghị ike ibupụta ụgbọala na-enweghị nọmba. Dị ka ihe atụ, ọ bụ naanị narị puku ụgbọala abụọ na puku iri anọ ka a na-agbanye nọmba kwa afọ na Beijing. N’Ọgọst 2012, ndị chọrọ ka a gbanye ụgbọala ha nọmba dị otu nde na puku iri ise, ma ndị a gbanyere nọmba dị naanị puku iri na itoolu, narị itoolu na iri abụọ na isii. Ọ pụtara na ọ bụ naanị otu onye ka a gbanyere nọmba n’ime iri mmadụ ise na atọ ọ bụla chọrọ ka a gbanye ụgbọala ha nọmba.
Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa—Nọvemba-Disemba 2013
mailto:?body=Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa—Nọvemba-Disemba 2013%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D102013362%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa—Nọvemba-Disemba 2013
NỌVEMBA 2013 Ihe Atọ Ego Na-agaghị Azụtali
mailto:?body=NỌVEMBA 2013 Ihe Atọ Ego Na-agaghị Azụtali%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dg13%26issue%3D201311%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=NỌVEMBA 2013 Ihe Atọ Ego Na-agaghị Azụtali